200 tapitrisa Ar ho an’ireo distrika : tratra aoriana ny fanoloran’ny CLD ny tetikasa | NewsMada
200 tapitrisa Ar ho an’ireo distrika : tratra aoriana ny fanoloran’ny CLD ny tetikasa
Ela ny fanoloran’ireo CLD any amin’ny distrika isanisany ny tetikasa fampandrosoana any amin’ny faritra misy azy. Nanaitra ireo depiote filohan’ny CLD ny talen’ny tetibola ao amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, ny 23 aogositra teo.
Andrasana izao ny fisian’ny tetikasa avy amin’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana avy any amin’ireo distrika isanisany. Efa vonona ny tetibola hanohanana izany, 200 tapitrisa Ar isaky ny distrika. Ny fitsinjarana izany miankina amin’izay tetikasa volavolain’ny komity fampandrosoana any an-toerana (CLD). Ny fampahafantarana izany tetikasa izany no mbola andrasana hatramin’izao, araka ny fanamarihan’ny ao amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola. « Miankina amin’ireo solombavambahoaka, filohan’ny CLD, isaky ny distrika nahavoafidy azy izao ny fanatanterahana izany », hoy ny talen’ny tetibola ao amin’ny minisitera, Razanajato Mialy Lanto.
Nisy taratasy nalefa any amin’ny Antenimierampirenena ho fanairana ireo solombavambahoaka momba izany tetikasa izany. Rehefa voafaritra mazava ny tetikasa, hiandraikitra ny fanapariahana ny tetibola ny ao amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana.
Mety tsy mitovy hevitra
Araka izany, miankina amin’ireo olom-boafidy ny fanapahan-kevitra horaisina. Efa nisy didim-panjakana navoaka ny volana mey momba ny andraikitry ny CLD. Io komity io no miantoka ny famolavolàna ny tetikasa rehetra. Olana anefa, filohan’ny CLD ihany ny depiote fa betsaka ireo olona mandrafitra azy, ohatra, ny ben’ny Tanàna, lehiben’ny sampandraharaham-panjakana any an-toerana, fiarahamonim-pirenena, mpandraharaha. Sarotra anefa ny mety hitovian’ireo olona ireo hevitra amin’izay tetikasa hajoro any aminy. Izay angamba ny antony mahatara ny fanolorana izay tetikasa hatao.
Nohamafisin’ny talen’ny tetibola, Razanajato Mialy Lanto, fa « izay tetikasa haroso tsy maintsy mifanaraka amin’ny fandaharanasa ankapobeny ho an’ny fampandrosoana ny firenena. Tsy maintsy faritan’ny CLD ihany koa izay laharam-pahamehana any aminy ».